Wararka - Waxqabadka Balaadhinta ee SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Safar Jiulongtan
Bishii Oktoobar 31, 2019, xilligan dayrta dahabiga ah, SJZ CHEM-PHARM CO., LTD waxay abaabushay shaqaale si ay u fuliyaan fuulitaanka buurta iyo howlaha horumarka ee Jiulongtan Scenic Area ee Degmada Pingshan, Shijiazhuang.
Waxaan wajahnay qorraxda subaxnimo subaxdii, waxaan galnay safar ka fog buuqa iyo buuqa magaalada. Buuraha ku lugee oo neefso hawo nadiif ah oo dabiici ah. Hawsha fuulitaanka banaanka, ma jirin cid ku qaylisay qadhaadh iyo daal, cidna looma harin oo dib looma ceshan, qaarna waxay si geesinimo leh ugu halgamayeen kaalinta koowaad oo ay iskaashi dhan usameeyeen. Daalkii xagga buuraha wuxuu isu beddelay farxad guushii qosolkii dabacsan. Intii aad jimicsi samaynaysay oo aad faraxsanayn, waxay sidoo kale si buuxda u muujisay tayada iyo sawirka wanaagsan ee kooxdayada Chenbang. Ka dib markii aan fuulnay, waxaan aadnay beerta tufaaxa si aan uga soo qaadno waxqabadyo, dhadhaminno tufaaxa cusub ee hadda laga soo xulay geedaha, ku soo dhowaanshaha dabeecadda iyo ku raaxeysiga farxadda goosashada.
Qaadashada waxqabadyada fidinta bannaanka oo ah buundo, ururku wuxuu abaabulaa buur fuula shaqaalaha, soo qaadista beeraha, iyo xafladaha cashada, taas oo fududeyneysa cadaadiska shaqada ee shaqaalaha isla markaana soo gaabinaysa masaafada u dhexeysa asxaabta. Waxay abuureysaa fursado wada-xiriirka u dhexeeya asxaabta. Shaqaalaha da'da yar waxay ku kasbadaan aqoon dheeri ah khibrad wadaagga shaqaalaha da'da weyn, shaqaalaha da'da ahna sidoo kale waxaa ku dhaca firfircoonida dhalinyarada ee dhalinyarada. Qof kastaa wuxuu leeyahay faham cusub oo midba midka kale ah wuxuuna xoojiyay wadajirka kooxda Chempharm.